Valvụ Cover, Lost Wax Nkedo Parts, mgbapụta Shell - Weiwo
Igwe anaghị agba nchara igwe akụkụ
Akụkụ ahụ mapụtara maka ugbo igwe
Aluminom ma ọ bụ ọla kọpa na ngwaahịa
Akụkụ ahụ mapụtara maka igwe nri
Ọzọ oge ufodu akụkụ
Weiwo a na-aga na nkenke machining akụkụ ahụ mapụtara maka afọ 10, anyị na-emepụta dị ka ndị ahịa si Eserese ma ọ bụ n'omume, na-arụ ọrụ kpamkpam izute ọ bụla ahịa arịrịọ. eri na-eme nke kacha mma na ngwaahịa, anyị nwere ibu ọrụ na-enye ọ bụla ahịa nụchara anụcha oru nkwado na mgbe ahịa ọrụ, anyị ga-abụ ihe anyị na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ ibe na n'okporo ụzọ nke ndụ.
1.We ga-ahazi nke ọma iji gboo mkpa ụlọ ọrụ gị. 2.Ikwenye bụ ihe kacha mkpa, yabụ anyị na-enye nkwado nkwado na ntanetị maka enweghị ụgwọ ọzọ. 3.We na-ekwe nkwa mmepe ngwa ngwa na ogo dị elu maka ọnụahịa asọmpi kachasị asọmpi 4.N'agbanyeghi ọtụtụ usoro iwu gị ga-agwụ. 5.You nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla ma chee na a ga-edozi nsogbu ọ bụla. Gị afọ ojuju bụ anyị kacha mkpa.
Kemgbe 2010, Weiwo toro site na nna ukwu omenka na azụmaahịa na-aga n'ihu nke ndị ahịa anyị nwere afọ ojuju. Anyị na-eme nke ọma na-aga n'ihu na-eme ka ndị mmadụ nwekwuo atụmanya kachasị elu.
Guzosie ike kemgbe 2010, anyị toro n'obodo anyị ma nwee nsọpụrụ nke ịkwaga mba ọzọ. Taa ụfọdụ ndị ahịa anyị kachasị elu bi na Europe na America. Anyi nwere oke nnuku na onye omenaala anyi ma ha were nkwanye ugwu jiri ahia obula.
Anyị ọkà otu e aku ígwè n'ichepụta ruo ọtụtụ afọ ma na anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ pụrụ iche na-abụghị ọkọlọtọ ngwaahịa nke teknuzu imewe, usoro ụzọ na quality management ...
Weiwo Company na-eme ihe nile ọ bụla dabeere na ime ihe n'eziokwu na ọrụ, anyị ozi bụ izute niile mkpa nke ndị ahịa, na anyị dị njikere na-arụ ọrụ na ndị ahịa ịzụlite a mmeri-mmeri na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu ...
Anyị nkenke ígwè akụkụ ahụ mapụtara na mmiri nwere exported na Europe, USA, Japan na Australia, ha na-ọma mara na anyị obodo place.Our ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe etinyere na mbukota ígwè ...